आविष्कार-विज्ञान-प्रविधि « Nagarik Khabar
कोरोनाका कारण फेसबुकका तीन कार्यालय बन्द, १ कर्मचारीमा पाइयो कोरोना
एजेन्सी । लण्डनस्थित आफ्ना तीन कार्यालयमा फेसबुकले सोमबारसम्मका लागि बन्द गरिदिएको छ । कम्पनीले यो फैसला आफ्ना एक र्मचारीमा कोरोना भाइरसको परिक्षणमा पोजिटिभ पाएपछि यस्तो कदम चालेको हो । स्काइ
अमेरिकी सैनिकका लागि अब यस्तो कवच, युद्धमा यसकाे काम यस्ताे
एजेन्सी । अमेरिकी सैनिकका लागि युनिफर्ममा अब नयाँ यन्त्र जडान हुने भएको छ । बडी आर्मर सेन्सरका रुपमा प्रयोग हुने यो कवचले सैनिकहरुलाई विष्फोट बारे जानकारीका साथै दिमागमा पर्ने असरबाट
समुद्र सुक्यो भने कस्तो होला संसार ? हेर्नुस् नासाका भयावह तस्बिर
एजेन्सी । पृथ्वीको ७० प्रतिशत हिस्सा महासागरले भरिएको छ । जम्मा ३० प्रतिशत हिस्सा जमिन छ । जहाँ मानिसको बसोबास रहेको छ । आज भोलि एउटा मानव समुदायका लागि खतराजनक
वैज्ञानिक कुँवरलाई भौतिकशास्त्रमा सफलता
काठमाडौं । भौतिक विज्ञानमा स्थापित विभिन्न मान्यताहरुको अपूर्णताका विषयमा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान गर्दै आएका युवा वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरले हालै विज्ञानको अर्को जटिल समस्याको समाधान गरेका छन् । म्याग्दीको बेनी
पानी तताउन र कोठा न्यानो पार्न युरोपको प्रविधि नेपालमा
पोखरा । यूरेपियन मुलुकहरुमा पानी तताउन र कोठा न्यानो गर्न थर्मल प्रविधिको प्रयोग अत्याधिक नै हुने गर्छ । अब सोही प्रविधि नेपालमा नै पाइने भएपछि घरायसी प्रयोग मात्रै नभई विशेष
अष्ट्रेलियन जहाज मार्फत नेपालमा पहिलो पटक पोखरा-मुक्तिनाथ केवलकारको लाइडर सर्वे !
काठमाडौं । संसारकै लामो यात्रुबहाक केवलकार (पोखरा-मुक्तिनाथ केवलकार)को अष्ट्रेलियन जहाज मार्फत सर्वेक्षण हुने भएको छ । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका इन्जिनियर बिकास पवनबसुले सर्वेको अन्तिम तयारी गरिएको बताएका छन् । सर्वेक्षणका
तीन दिनसम्म मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर मेघ गर्जनसहित वर्ष हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ । पूर्वमा बनेको न्यून चापीय रेखा र स्थानीय वायुको
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको बताएका छन् । बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियल तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्हालय विकास समितिको आयोजनामा भएको तीन
मानवीय कारणले नै अघिल्लो वर्ष भन्दा बढी वर्षा ! (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । नेपालमा प्रिमनसुनको समय सुरु भएको छ । तर केही महिना देखिनै औसत भन्दा धेरै पानी परेको छ । नेपालमा सामान्यतया जुन १० मा मनसुन सुरु हुने र सेप्टेम्बर
न्यूटनले विज्ञान नै बुझेका थिएननः भारतीय वैज्ञानिक
नयाँदिल्ली । भारतीय वैज्ञानिकले प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री आइज्याक न्युटन र अल्बर्ट आइन्स्टाइनद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको खण्डन गर्दै तिनले विज्ञान नै नबुझेको तर्क गरेका छन । धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्नेगरी एक जनाले त भारतका
भादगाउँ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको तलेजुको वाहनका रुपमा पुजिने सेतो घोडाको जात्रा गए राति
उदयपुर । पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्गबाट नजिकै रहेको चारैतिर जंगलले घेरिएको बीचमा ठुलो पोखरी देखिने
सांसद्को हत्यामा मुस्लिम अतिवादीको संलग्नता : बेलायत प्रहरी
लन्डन । बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद सर डेभिड अमिसको हत्यालाई बेलायत प्रहरीले आतंककारी हमला भनेको